देउवा सरकार सर्वत्र असफल, फेरि संसद विघटनको ‘रिहर्सल’ ! | वर्णन मिडिया - सूचना तथा समाचारको संवाहक |
देउवा सरकार सर्वत्र असफल, फेरि संसद विघटनको ‘रिहर्सल’ !
असफल मात्र होइन, देउवाको शासकीय अक्षमता र सत्ता सहयात्री दल तथा नेताहरुका परस्पर विपरीत स्वार्थको टकरावका कारण चौतर्फी संकट सिर्जना हुँदै छ
२०७८ भाद्र ३०, बुधबार ०५:१४:००
काठमाडौँ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकार ६० दिन नपुग्दै सर्वत्र असफल भएको छ । असफल मात्र होइन, देउवाको शासकीय अक्षमता र सत्ता सहयात्री दल तथा नेताहरुका परस्पर विपरीत स्वार्थको टकरावका कारण चौतर्फी संकट सिर्जना हुँदै छ ।
देउवा प्रधानमन्त्री चयन भएको दुई महिनासम्म सरकारलाई पूर्णता दिन नसक्नु, प्रधानमन्त्री स्वयंको सचिवालय निर्माण नहुनु तथा सत्तारूढ गठबन्धनका दलहरूबीच प्रमुख मुद्दामा समझदारीसमेत निर्माण हुन नसक्नुले सरकारसँगै गठबन्धन नै असफल सावित भएको छ ।देशका लागि अत्यावश्यक खर्चका लागि बजेटसमेत पारित गर्न नसकेपछि सरकारले पूर्णरुपमा आफ्नो औचित्य गुमाएको छ । एकातिर मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएन, अर्कोतिर देश सञ्चालनका लागि अत्यावश्यकीय बजेटसमेत पारित नगरेर समस्या तिम्त्याउने काम सरकारबाटै हुनुले मुलुकलाई अरु बहुआयामिक संकटतर्फ उन्मुख गराएको छ ।
सरकारकै अक्षमताले अब बुधबार राती १२ बजेदेखि राज्यकोषबाट खर्च गर्न नपाइने स्थिति बनेको छ । अघिल्लो सरकारले ल्याएको अध्यादेश बजेट अस्वीकार गरे पनि यो सरकारले संसदबाट नयाँ बजेट समयमै पारित गराउन नसक्दा सरकारी खर्च नै बन्द हुने स्थिति आएको हो।
प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकले बजेट प्रतिस्थापन विधेयक टुङ्गो लगाउन नसकेपछि अब सरकारले कर उठाउन सक्नेछ तर खर्च गर्न भने पाउने छैन। यसअघि अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट संसद चलेको ६० दिनभित्र पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण समेत गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन सकेन । यति मात्र होइन, सरकारले आफै ल्याएको प्रतिस्थापन विधेयक समेत सदनबाट पारित गराउन नसक्ने अवस्था आएपछि देउवा सरकारको राजनीतिक धरातल समेत खुइलिएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले सबै परिस्थितिको जिम्मेवार सरकार र सभामुख हुने चेतावनी दिएको छ। अब प्रकृयाबाट बजेट पारित गरेर प्रमाणीकरण हुन झण्डै दुई साता समय लाग्ने देखिन्छ । दलीय द्वन्द्वका कारण संसद प्रभावित हुँदा राज्यकोष नै बन्द हुने स्थिति ७० बर्षे बजेट इतिहासमा पहिलो घटना हो । संसदको अर्को बैठक असोज ४ गते मात्र बोलाइएको छ ।
आसन्न संकटबारे जानकार हुँदाहुँदै वैकल्पिक व्यवस्था गर्न नसक्नु सरकारको अर्को अक्षमता हो । यो अवस्था आइहालेमा के गर्ने भन्ने वैकल्पिक व्यवस्थाबारे सोच्नै नसकेको देखिन्छ । किनभने, नगरी नहुने आपतकालीन खर्चका लागि सरकारले पेस्की विधेयक ल्याएर सदनको स्वीकृति लिन सक्थ्यो । यसतर्फ कुनै पहलै नगरेको देखिन्छ । विपक्षीलाई पेलेरै अघि बढ्ने मानसिकतामा सरकार अघि बढ्नु र संवाद तथा सहमतिका लागि समन्वयकारी भूमिका खेल्नुपर्ने सभामुख अग्नि सापकोटा केवल सत्ता पक्षको मतियार मात्र बन्नुले पनि संकटको आगोमा घिउ थपेको देखिन्छ ।
यस प्रकारका गतिविधिले सरकारी बजेट मात्र प्रभावित भएको छैन, सिंगो राष्ट्रिय अर्थतन्त्र नै संकटमा पर्न सक्नेछ ।
करदाताबाट राजस्व असुल्ने तर खर्च नगरी सरकारी ढुकुटीमै राख्ने गर्दा बजारमा तरलता अभाव सिर्जना हुन सक्छ । त्यसका धेरथोर असर पुँजीबजारमा देखिइसकेको छ । दसैँको मुखमा बजारमा नगद प्रवाह रोकिँदा महँगी अझै चुलिन सक्नेछ । महामारी, लकडाउन र आर्थिक मन्दीका कारण आहत भएकाम जनता नयाँ सरकारबाट राहतको अपेक्षा गरिरहेका बेला घाउमा नुनचुक छर्किने काम सरकारबाटै हुँदा समाजमा अरु प्रकारका अपराध, बेथिति र वेचैनी बढ्न सक्नेछ ।
एमसीसीदेखि बजेटसम्मका कुनै पनि महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव संसदबाट पारित गराउन नसक्ने भएपछि अब यो सरकारले पनि संसदलाई नै तारो बनाउने जोखिम उत्तिकै बढेको छ । तत्कालका लागि संसद अधिवेशन अन्त्य गरी अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन सक्ने चोर बाटो सरकारसँग भए पनि नैतिक रुपमा सबैभन्दा घटिया काम हुनेछ यो । किनभने, हिजो अध्यादेशकै विरोध गरेर जन्मिएको यो गठबन्धन सरकार आज सरकार टिकाउन पनि अध्यादेश, कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पनि अध्यादेशको भर पर्नु भनेको नैतिक पतनको पराकाष्ठा हो ।
यो चौतर्फी असफलतालाई ढाकछोपका लागि देउवाले अब संसद विघटन गरी चुनाव घोषणा गर्न सक्नेछन् । प्रतिपक्षी एमालेले त चाहेकै यही हो । तर, जसपा, लोसपा र एकीकृत समाजवादीहरु संसदको असामयिक हत्यापछि देउवासँगै मलामी जान्छन् कि फेरि संसद पुनःस्थापनाको माग गर्दै अर्को आन्दोलन गर्छन् ? प्रतीक्षाको विषय छ ।